သိန်း ၃၀၀ ဖိုးအကုန်ခံပြီး ပြည်သူတေသွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့လမ်းခင်းပေးတဲ့အလှူရှင် – ရှအေလငျး
အလှူတကာ့ အလှူထဲမှာ အမြတ်ဆုံး အလှူဟာ အများအဆင်ပြေစေဖို့ ကြည်ဖြူစွာ ပေးလှူတဲ့ အလှူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လမ်း၊ တံတား ၊ အဆောက်
အဦ များကို ပေးလှူသူတွေက ပိုလို့ပင် မြတ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အခုတစ်ခါမှာတော့ အများအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ချွေးနဲစာကို စုပြီးလမ်းခင်းပေးလိုက်တဲ့ မြဝတီ မြို့က အလှူရှင် တစ်ဦးအကြောင်းကို ပြောပြချင်လို့ပါ။
အလှူရှင်အမည်ကတော့ ဒေါ်ခင်ကြူတာလို့ ခေါ်ပြီးတော့ မြဝတီမြို့ အမှတ်​(၄)ရပ်​ကွက် မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းစားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်ပါ
တယ်။ သူမဟာ အခုလို မိုးရာသီမှာ လမ်းတွေပျက်တာ ၊ ဗွက်ထတာကို မြင်ရပြီးတော့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးတွေနဲ့ အများသူငါ လမ်းခရီးခက်ခဲနေတာ
မို့ သူမရဲ့ ချွေးနဲစာထဲကနေ သိန်း ၃၀၀ အကုန်အကျခံပြီး လမ်းကို ပြန်ပြင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ သာဓု သာဓု ခေါ်ပါတယ်။
လမ်းအကျယ် ကတော့ 22 ပေ ရှိပြီး အရှည်က ပေ 700 လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်. ..အားလုံးပဲ အခုလို မွန်မြတ်တဲ့ အလှူရှင်ရဲ့ အလှူကို သာဓု
အလှူတကာ့ အလှူထဲမှာ အမွတျဆုံး အလှူဟာ အမြားအဆငျပွစေဖေို့ ကွညျဖွူစှာ ပေးလှူတဲ့ အလှူပဲဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ လမျး၊ တံတား ၊ အဆောကျ
အဦ မြားကို ပေးလှူသူတှကေ ပိုလို့ပငျ မွတျတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။
အခုတဈခါမှာတော့ အမြားအဆငျပွစေဖေို့အတှကျ ခြှေးနဲစာကို စုပွီးလမျးခငျးပေးလိုကျတဲ့ မွဝတီ မွို့က အလှူရှငျ တဈဦးအကွောငျးကို ပွောပွခငျြလို့ပါ။
အလှူရှငျအမညျကတော့ ဒျေါခငျကွူတာလို့ ချေါပွီးတော့ မွဝတီမွို့ အမှတျ(၄)ရပျကှကျ မှာ နထေိုငျသူဖွဈပွီး ထိပျတနျးစားသောကျဆိုငျ ပိုငျရှငျလညျး ဖွဈပါ
တယျ။ သူမဟာ အခုလို မိုးရာသီမှာ လမျးတှပေကျြတာ ၊ ဗှကျထတာကို မွငျရပွီးတော့ ကြောငျးသား ကြောငျးသူလေးတှနေဲ့ အမြားသူငါ လမျးခရီးခကျခဲနတော
မို့ သူမရဲ့ ခြှေးနဲစာထဲကနေ သိနျး ၃၀၀ အကုနျအကခြံပွီး လမျးကို ပွနျပွငျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျတဲ့ ။ သာဓု သာဓု ချေါပါတယျ။
လမျးအကယျြ ကတော့ 22 ပေ ရှိပွီး အရှညျက ပေ 700 လောကျရှိတယျလို့ သိရပါတယျ. ..အားလုံးပဲ အခုလို မှနျမွတျတဲ့ အလှူရှငျရဲ့ အလှူကို သာဓု
သမီးရင်း ကို အကြိမ်ကြိမ် သားမယားပြု ကျင့်ပြီး ကိုယ် ဝန်ဖျက်ချခိုင်း တဲ့...
မြန်မာအိုင်ဒေါသီချင်းကို အန္တရာယ်များကြားထဲက အလန်းစား ကပြလိုက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်...